कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन बलत्कार ? - तितोपाटी
तितोपाटी- पछिल्लो समय हत्या , हिंसा, बलात्कार जस्ता जखन्य अपराधका घटनाहरु दिनानुदिन बढदै गइरहेका छन।
भखरै मात्र बझाङको मष्टा गाउँपालिका २ की १२ वर्षीय बालिका सम्झना कामीको बलत्कार पछि हत्या भयो ।
कोरोनाको कहर र लकडाउनको बिचमा पनि यौन हिंसा, बलत्कारका घटनाहरु बढेर गएको देखिन्छ।
यस्ता घटनाहरु किन हुन्छन? यसका पछाडीको मनोबैज्ञानिक कारणहरु के के हुन सक्छन हेर्नुहोस
अप्राकृतिक यौन व्यवहार : जसले यौनलाई सम्भोगको रुपमा भन्दा स्खलनको माध्यम बनाउछ , यस्ता ब्यक्तिले अरुको भावना बुझ्न सक्दैनन र स्बभाबिक यौन व्यवहार गर्न पनि जान्दैनन् । यस्ता ब्यक्तिले बलत्कार गर्ने पनि सम्भाबना हुन्छ ।
लागू प्रदार्थको सेबन स् यसको सेबनगर्दा ब्यक्तिले बिबेक र चेतना गुमाउन सक्छ र बलत्कार गर्न पुग्छ ।
पोनोग्राफी र साईबर सेक्सको लत : पोनो ग्राफीमा बाबुले छोरीसँग यौन सम्पर्क , दाजुले बहिनिसगँ शारिरिक सम्बन्ध , आदिजस्ता श्रीषकका अस्लित भिडियो धेरै भेटिन्छन । यस्ता कुरा धेरै हेर्न तथा यी कुराको लत भएको ब्यक्ती नैतिक रुपमा पतन भै हाडनाता करणी गर्न सक्छ ।
मानसिक रोग : मेनिया जस्तो कडा मानसिक रोग लागेको ब्यक्ति सधै उत्तेजित हुन्छ ।उसको व्यवहार र बिचार
शरिरिक कारण : शरिरमा सेक्स हर्मन बढदा यौन चाहना बढन गई , आफुलाई यौन अनुशासनमा राख्न नसक्दा पनि बलत्कारका घटना हुन पुग्छ ।
अति बिश्बास गर्नु : घर परिबारका सदश्य बिच चाहिने भन्दा बढि घनिष्टता , अति बिस्बास र नाता अनुसारको व्यवहार र अनुशासनमा बस्न नसक्दा पनि आफन्त बिच नै करणीका घटना हुन सक्छन् ।
मनोबैज्ञानिक असर : सानोमा यौन दुर्ब्यबहारमा परेको ब्यक्ति पनि पछि गएर यौन अपराधी हुन सक्छ ।
यौन अनुशासन नहुनु : सानैबाट यौन अनुशासन नभएको , पतित , बिखण्डित , अनुशासन हिन , चरित्र हिन घर परिबार र समाजमा हुर्केको बच्चा पनि पछि गएर यौनमा बिचलिन हुन सक्छ ।
यी र यस्ता अन्य धेरै यौन समस्या ( बिचलन) , मानसिक एवं मनोबैज्ञानिक समस्याका कारण आफन्तले नै आफन्तलाई जबर्जस्ती करणी गर्न सक्छ । यस्ता ब्यक्तिलाई मानसिक रुपमा स्बस्थ ब्यक्ति मान्न सकिँदैन । किन कि मानसिक रुपमा स्बस्थ ब्यक्तिले समाजले स्बिकारेको मात्र काम गर्छ । काम गर्नु अगाडि परिणमको बारेमा सोच्छ । के ठिक के बेठिक छुट्टाउन सक्छ । आफ्नो आबेगलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । सामाजिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्छ । यी र यस्ता गुण नभएको ब्यक्ति मानसिक स्बास्थ्यका हिसाबले रोगी मानिन्छ ।
September 30, 2020 7:56 pm | नेपालको समाचार, प्रवास, विचार/ब्लग, विज्ञान र प्रविधि, विविध, स्वास्थ्य